I-Qatar ivula ngaphezulu kwe-100 kwiihotele ezintsha zeNdebe yeHlabathi yeBhola eKhatywayo ye-2022
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseQatar zokuqhekeka » I-Qatar ivula ngaphezulu kwe-100 kwiihotele ezintsha zeNdebe yeHlabathi yeBhola eKhatywayo ye-2022
Airlines • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iintlanganiso • iindaba • Iindaba zaseQatar zokuqhekeka • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Iphothifoliyo eyomeleleyo yeQatar ye-184 yenziwe ngamaqhosha egumbi angama-32,000.
I-Qatar ilungiselela ukusingatha iNdebe yeHlabathi yeBhola eKhatywayo iQatar 2022.
Iipropathi ezizayo ziyinxalenye yesicwangciso seQatar sokwahlulahlula umnikelo kunye nokwandisa isibheno kubakhenkethi.
I-Qatar yandisa ukhenketho lwayo lwehlabathi ngokuhambelana noMbono weSizwe weQatar 2030.
I-Qatar yongeza iihotele ezintsha eziyi-105 kunye neendawo zokuhlala ehotele kwizikhundla zayo esele zibanzi, njengoko ilizwe lilungiselela ukusingatha INdebe yeHlabathi yeBhola eKhatywayo iQatar 2022 ™. Iipropathi ezintsha ziya kusandisa isibheno seQatar kuluhlu lwabakhenkethi kunye nokuphucula amava abatyeleli, njengoko uKhenketho lwaseQatar luqhubeka nomsebenzi walo wokuguqula ilizwe libe yindawo ekhokelela kwihlabathi.
Olunye uvulo lwakutshanje lwehotele yiBanyan Tree Doha, indawo yepropathi eneenkwenkwezi ezintlanu, eyilwe ngobunono ngumyili wezakhiwo odumileyo uJacques Garcia. Ukuvulwa kwehotele kubude balo nyaka kubandakanya, umzekelo, iPullman Doha West Bay, ipropathi eneenkwenkwezi ezintlanu zeAccor; iJW Marriott West Bay, enomtsalane ngaphandle nangaphezulu; kunye nehotele yaseSteigenberger, edume ngokubuka iindwendwe ngokukodwa. Nganye kwezi hotele zintsha inegalelo lokuzonwabisa okhethekileyo okanye amava e-Qatar ye-184-yeepropfoliyo eyomeleleyo, eyenziwe ngamaqhosha egumbi angama-32,000.
Iqela leQatar Airways UMlawuli oyiNtloko kunye noSihlalo wezoKhenketho eQatar, oHloniphekileyo Mnu. kuhlahlo-lwabiwo mali kunye neemfuno. Ezi propati zizayo ziyinxalenye yesicwangciso-qhinga sethu sokunikezela ngezixhobo zethu kunye nokwandisa isibheno sethu kubakhenkethi. Kuyasivuyisa ukwandisa umnikelo wethu wokhenketho lwehlabathi ngokuhambelana Umbono weSizwe weQatar 2030 kwaye unike abahambi ezinye iindlela zokufumana eyona ntle yaseQatar. ”
Kutshanje kuvulwe iinkwenkwezi ezintlanu iBanyan Tree Doha ibonelela nge-oasis yobunewunewu entliziyweni yesixeko.
Ngomdibaniso womsebenzi kunye nokudlala, iPullman Doha West Bay enamagumbi angama-375 namagumbi okutyela kunye namagumbi angama-93 kufuneka ivulwe kamva kulo nyaka.
Abo bafuna ukonyusa iimbono zesibhakabhaka saseDoha kungekudala baya kukwazi ukonwabela ukuhlala kwindawo enemigangatho engama-53 i-JW Marriott West Bay.
Abahambi abafuna indawo yokuhlala kufutshane nesikhululo seenqwelomoya baya kuba nakho ukubhukisha igumbi le-204 lamagumbi eSteigenberger Hotel Doha.
Isabelle Cote uthi:
NgoSeptemba 3, 2021 kwi-16: 29
Okokugqibela ndifumene ezinye iinketho zehotele eQatar 2022… 4-5 ubuncinci bobusuku… Bebefuna ubuncinci ubusuku obungama-30 ukuya kuma-40 ubuncinci kwiNdebe yeHlabathi yeFIFA. Yayiyi-RIDICOULUS, babuyela umva… http://www.WorldCupStadiumHotels.com , hayi ngamaxabiso aphantsi kodwa asezantsi kwaye abiza ixabiso eliphantsi kunayo nayiphi na enye into endiyibonileyo… IMINYAKA emi-2 ijonge iiDoha Hotels… OMG !!!